မျက်နှာသွယ်လျ လှပအောင် countouring ချနည်း | YUYU BEAUTY
You are at:Home»Makeup»မျက်နှာသွယ်လျ လှပအောင် countouring ချနည်း
မျက်နှာသွယ်လျ လှပအောင် countouring ချနည်း
By on	 13/11/2016 Makeup
လိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ စိတ်ညစ်ခံမနေဘဲ မိမိမျက်နှာကို သွယ်လျလှပအောင် မိတ်ကပ်နဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးဖို့အတွက် Highlight & Countour လုပ်နည်းလေးအဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
1.မိတ်ကပ်သားတာရှည်ခံအောင် Primer ကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။
2. မိမိအသားအရေနှင့်လိုက်ဖက်သည့် foundation ကိုအသုံးပြုပါမည်။
ရေမြှုပ်ဖော့ (သို့) စုတ်တံဖြင့် နေရာလွတ်မကျန်အောင် ညှိယူရပါမည်။
3.Shadow အရောင်ထွက်မှန်ကန်အောင် Eye Primer ကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။
4. အပြစ်အနာအဆာတွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့အတွက် conceler ကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။
concelerကို မျက်နှာပြင်တွင်ရှိသည့် မျက်တွင်းနေရာ အမဲစက်များရှိသည့်နေရာများတွင် လက် (သို့) ရေမြှုပ်ဖြင့် ပုတ်ပုတ်ပြီး လိမ်းပေး၇ပါမည်။
အညိုရောင်ကို နှာခေါင်းဘေးဖက် ပါးရိုးနှစ်ဖက် နှင့် အောက်မေးရိုးနေရာတွေမှာ လိမ်းပြီး လက်ဖြင့်ဖြည်ပေးပါ။
6.Two way Powder ကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။
Two way Powder ကို အညိုခြယ်ထားသောနေရာမှလွဲ၍ ကျန်နေရာများတွင် စုတ်တံဖြင့်ယူ၍ မျက်နှာကိုလိမ်းပေးရပါမည်။
Bronzer powderကိုစုတ်တံဖြင့်ယူ၍ အညိုခြယ်ထားသော နေရာများတွင် လိမ်းပေးပါ။
8.Highlight Powder ကိုအသုံးပြုပေးရပါမည်။
Highlight Powder ကိုစုတ်တံဖြင့်ယူ၍ နဖူး နှာခေါင်း ပါးမို့နှစ်ဖက် မေ့စေ့နေရာတွေမှာ ရေမြုပ်ဖော့ဖြင့် လိမ်းပေးရပါမည်။
9.Highlight & Countouring လိမ်းခြယ်နည်းပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီ။
အဆီပြန်ခြင်းကင်းတဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုရဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ Pore Refining Anti-Shine Base က အဆီပြန်ခြင်းကိုထိန်းပေးပြီး ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပါတယ်။ မိတ်ကပ်ကို ကြာရှည်ခံစေပြီး လှပပြည့်စုံတဲ့ မျက်နှာတစ်ခုရဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အသားအရေအားလုံးအတွက် ဘေးဥပါဒ်မဖြစ်ကြောင်း ၊အန္တရာယ်မရှိကြောင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အသားအရေကို နဂိုအတိုင်းဖြစ်နေစေပါသည်။ အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသော formulaက နေရောင်ကြောင့် အသားအရေပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော အမဲကွက်-အမဲစက်များကို ၄ပတ်အတွင်း ပျောက်ကွယ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သဘာဝ ရုက္ဓဗေဒ ပါဝင်စည်းများကြောင့် ရေဓါတ်လိုအပ်နေသော အသားအရေအား ချက်ခြင်ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပါသည်။ ပြင်သစ် ပိုလီနီရှားမှ Koparaနှင့် တွင်းထွက်ပစည်းများကြွယ်ဝသော ဆားငံရေတို့မှ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထုတ်ဖော်ထားခြင်းကြောင့် အသားအရေကို ပိုမို နုညံ့၊ ချောမွေ့ခြင်းနှင့် ပိုမို တောက်ပလင်းလက်စေပါသည်။
The Contouring Palette contains four creamy matt textures andahighlighter with light-reflecting pigments for perfectly defined facial features.
The two darker colours are used to shade the hollows of the face for visible reduction, while the two lighter nuances highlight the features.
catrice HD multi talent powder & make up
The Matt Bronzing Powder ကသင့်မျက်နှာနဲ့ခနာကိုယ်ကို သဘာဝအတိုင်းညိုမှောင်ပြီး နေထိထားတဲ့ အသားရောင်ကိုရရှိစေပါတယ်။ ရောင်ခြယ်မှုန်လေးများပါဝင်တဲ့ ပေါင်ဒါဖြစ်ပြီး လန်းဆန်း တောက်ပတဲ့ခံစားမှုကိုရရှိစေပါတယ်။ အသားဖြူသူနှင့်ညိုသူများအတွက် အရောင်နှစ်ရောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
MAC HIYPER REAL PRESSED